Marka aad iska diiwaan geliso xagayaga waxay talaabada ku xigtaa noqonaysaa inaynu si wada-jir ah u samayno qorshe si aad sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah u hesho shaqo ama waxbarasho.
Adiga iyo shaqo dhex-dhexaadiyahaaga ayaa ku heshiinaya nooca hawlaha ee sida ugu fiican adiga kuugu haboon. Tani waxay ahaan kartaa tusaale ahaan inaad ka qayb qaadato waxbarasho intarnatka ah, qorida CV-ga ama barashada iswiidhishka. Ka dibna waa adiga laf ahaantaada inaad ka dhigto qorshahan mid waaraya oo aad is xil qaanto si aad u gaarto hadafkaaga.
Qorshahaaga waxaad ka helaysaa hoosta Mina sidor marka aad ku gasho aqoonsiga elaktarooniga ah. Halkan waxaad ka helaysaa sawirka guud ee hawlahaaga – kuwa aad dhamaysay iyo kuwa kuu ah talaabada ku xigta labadaba.
Haddii aanad haysan kombiyuutar gaar kuu ah ama telafoonada casriga ah waad na soo booqan kartaa oo isticmaali kartaa kombiyuutaradayada.
Haddii aanad haysan aqoonsiga elaktarooniga ah waxaad shaqo dhex-dhexaadiyahaaga ka heli kartaa qorshahaaga oo ku daabacan warqad.